TRAILERS: Blumhouse & Amazon jikọtara: 4 Ihe nkiri ọhụrụ gụgharia 2021
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ TRAILERS: Blumhouse & Amazon jikọtara: 4 Ihe nkiri ọhụrụ gụgharia 2021
Nke a bụ trailers na nkọwapụta maka "Welcome to the Blumhouse"
by Timothy Rawles September 14, 2021
by Timothy Rawles September 14, 2021 1,026 echiche
Kwuo ihe ị ga -achọ gbasara ika Blumhouse, mana ha na -emepụta ọtụtụ ọdịnaya maka ndị na -atụ ụjọ. Afọ a bụ oge nke abụọ ha na Amazon jikọtara ọnụ Nabata na Blumhouse; usoro ihe nkiri dị maka ịkwanye na ya ndị debanyere aha Prime.
N’okpuru, ị ga -ahụ akwụkwọ ndekọ aha nke afọ a nke nwere nkọwa maka ihe nkiri ọ bụla na ihe na -adọkpụ ya. Mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na nke ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị a niile nwere mmasị na nke ị na -ele anya ịhụ. Ọzọkwa, mee ka anyị mara ihe ị chere gbasara Blumhouse na ọdịnaya ya.
Eleghi anya anyị nwere oke ọhụhụ ịhụ Barbara Hershey ka ọ na -alọta na ihe nkiri ụlọ na -adịghị mma!
Duru ya: Gigi Saul Guerrero
dere: Shane McKenzie, Gigi Saul Guerrero, Perry Blackshear
starring: Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake na Joshua Caleb Johnson
Executive Nke mepụtara: Jason Blum, Lisa Bruce, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Raynor Shimabukuro
Mgbe onye ajọ mmadụ na-eyi ndị bi na mpaghara obere ego egwu, otu onye isi obodo na-agba mbọ igbochi ya Ọkụ Bingo, ihe nkiri mbụ na -atụ ụjọ nke nwere ihe ọchị na -atọ ọchị. Mgbe ihe ruru mmadụ iri isii Lupita (Adriana Barraza) chọpụtara na onye ọchụnta ego dị omimi aha ya bụ Maazị Big (Richard Brake) weghaara ụlọ ezumike bingo ya nke ọ hụrụ n'anya, ọ na-akpọkọta ndị enyi ya merela agadi ka ha lụso ọgụ ọgụ megide onye ọchụnta ego enigmatic. Mana mgbe ndị agbata obi ya ogologo oge malitere ịmalite ịnwụ anwụ n'ọnọdụ ọjọọ, Lupita chọpụtara na mberede na ime ka ọ dịkarịa ala bụ nsogbu ya. Ihe na -emenye ụjọ emeela onwe ya n'ụlọ na barrio nke dị jụụ nke Oak Springs, na mkpu ọ bụla nke "Bingo!" ọzoo onye ọphu meru iphe -a. Ka ihe nrite ego na-abawanye, ọnụ ọgụgụ ahụ na-arịkwa elu na-arị elu, Lupita ga-eche ihu na-eyi egwu na egwuregwu a bụ n'ezie mmeri.
Black dị ka abalị:
Duru ya: Maritte Lee Go
Dere: Sherman Payne
starring: Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle ya na Craig Tate na Keith David
Executive Nke mepụtara: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina na Guy Stodel
Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma hapụrụ ụmụaka mgbe ọ lụsoro otu vampires na -egbu egbu ọgụ Nwa dị ka Abalị. Afọ iri na ise ka oke ifufe Katrina bibisịrị New Orleans, ihe iyi egwu ọhụrụ na -etinye akara ya na Nnukwu Mfe n'ụdị ọnya ọkpọ na akpịrị nke ndị bi n'obodo na -enweghị nsogbu. Mgbe nne ya riri ọgwụ ike ghọrọ onye kacha bụrụ onye nwụrụ anwụ, Shawna dị afọ 15 (Asjha Cooper) kwere nkwa ọbụna akara ya. Ya na ndị enyi atọ tụkwasịrị obi, Shawna na -achọ atụmatụ obi ike ịbanye n'ime ụlọ vampire na Quarter French mere eme, bibie onye ndu ha, ma mee ka ndị na -eso ụzọ ya nwere mmasị laghachi n'ụdị mmadụ ha. Mana igbu nnukwu anụ abụghị ọrụ dị mfe, n'oge na-adịghịkwa anya, Shawna na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ya hụrụ onwe ha na ọgụ nke otu narị afọ n'etiti ndị otu vampire na-alụ ọgụ, onye ọ bụla na-alụ ọgụ ịzọrọ New Orleans dị ka ebe obibi ha na-adịgide adịgide.
Duru ya: Ryan Zarazoga
dere: Marcella Ochoa & Mario Miscione
starring: Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill, na Elpidia Carrillo
Executive Nke mepụtara: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma na Matthew Myers
Beto (Tenoch Huerta) na Diana (Ariana Guerra), di na nwunye na-eto eto Mexico na America na-atụ anya nwa mbụ ha, kwaga n'otu obere obodo na 1970 nke California ebe enyere Beto ọrụ na-elekọta ugbo. N'ịbụ onye kewapụrụ onwe ya na obodo ma nwee ọhụhụ nrọ na -agbagwoju anya, Diana na -enyocha ebe a na -azụ anụ ụlọ ebe ha bi, na -achọta ọtụmọkpọ mara mma na igbe nwere ihe ndị bi na mbụ. Nchọpụta ya ga -eduga ya n'eziokwu nke na -amabughị na ihe na -emenye ụjọ karịa ka ọ tụrụ anya ya.
Edere ma duzie ya: Axelle Carolyn
starring: Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett na Katie Amanda Keane
Executive Nke mepụtara: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King na Richard J Bosner
Ike ọjọọ na -awakpo ndị bi n'ụlọ ebe a na -elekọta ndị agadi EGO, akụkọ gothic nke ụjọ nwere ntụgharị oge a. Mgbe ọrịa strok na -ebelata ikike o nwere ilekọta onwe ya, Judith Albright (Barbara Hershey) na -akwaga Golden Sun Manor, ụlọ ebe enyere aka nwere aha ọma. Mana n'agbanyeghị mbọ kacha mma nke ndị ọrụ, yana ezigbo enyi Roland (Bruce Davison), ihe iju anya na ọhụụ abalị na -eme ka Judith kwenye na ọnụnọ ọjọọ na -emebi nnukwu ala. Ka ndị bi na -amalite ịnwụ ihe omimi, ịdọ aka na ntị ịdọ aka ná ntị Judith bụ ihe efu. Ọbụnadị nwa nwa ya Josh (Nicholas Alexander) chere na ihe na -atụ ya ụjọ bụ nsonaazụ mgbaka, ọ bụghị ndị mmụọ ọjọọ. Ebe ọ nweghị onye dị njikere ikwere ya, Judith ga -agbanarịrị oke nke manor, ma ọ bụ daa n'ihe ọjọọ nke bi n'ime ya.
Nweta nkwado site na Blumhouse.